Las Celdas, Louise Bourgeois ihe ngosi na Guggenheim Museum na Bilbao | Akụkọ Njem
Las Celdas, ihe ngosi nke Louise Bourgeois gosipụtara na Guggenheim Museum na Bilbao
Monica sanchez | | nakwa na Bilbao, omenala
Foto - Allan Finkelman
Mụ mmadụ na-achọkarị ụzọ ha ga-esi hapụ uzuoku, ka ha nwee ike igosipụta, n’otu ụzọ ma ọ bụ n’ụzọ ọzọ, ihe niile ha na-ebu n’ime na ọ dị ha mkpa inwe ike ịkọrọ. Mgbe ụfọdụ ndị na-ege ntị bụ ndị ezinụlọ ya ma ọ bụ ndị enyi ya, ndị ọzọ bụ ndị a na-amaghị ama, na ọtụtụ ndị ọzọ ọ bụ ya onwe ya: Na oge niile otu akụkụ nke ya na-agwa ya na mgbe ọ na-arụ ọrụ ya, ma ọ bụ ozugbo ọ gwụchara, ị ga-ahụ azịza nye ajụjụ gị na-agụsi gị agụụ ike.
Ihe okike buru ibu na - esite na nwata ma obu ndu siri ike, dika o mere onye omenkà nke oge a Louise bourgeois. Ugbu a, ruokwa na Septemba 4, ị nwere ike ịhụ akụkụ nke ọrụ ya na Guggenheim Museum na Bilbao. Iji nyere gị aka ịghọta ya na, na mberede, ịmalite iju gị anya, anyị na-etinye ụfọdụ onyonyo nke ọrụ ya.
Foto - Robert Mapplethorpe
A mụrụ Louise Bourgeois na Paris na 1911 wee nwụọ na New York na 2010. Ọ bụ otu n'ime ndị na-ese ihe n'oge a, ọ bụghịkwa ihe ijuanya: ọrụ ya, nke sitere n'ike mmụọ nsọ na enweghị ntụkwasị obi ọ nwere n'oge ọ bụ nwata, nwere a ụgwọ mmetụta uche siri ike na ị nwere ike ịhụ ya ozugbo ị hụrụ ya, na na, n'agbanyeghị ihe niile, a na-ekwu na ọ na-enwekarị ọ cheụ na obi ụtọ. Ọ bụ ike ahụ ka ọ jiri chee nsogbu ndị ndụ na-eweta ihu, na nke gosipụtara na ihe osise ya, eserese na nrụnye ọ hapụrụ anyị. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ malitere imepụta sel ya site n’afọ 70.
N'ebe ha ka o bu n'uche iwu ihe owuwu ụlọ ọ ga-agagharị, nke mejupụtara ọnụ ụzọ, ntanye waya ma ọ bụ windo ejiri akara ngosi siri ike. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ahụ bụ ihe mmegharị ugboro ugboro: e gosipụtara ya dị ka ebe nchekwa, kamakwa dị ka a ga-asị na ọ bụ ụlọ mkpọrọ. Dị ka ịmata ihe, a ghaghi ikwu na ụmụ nwanyị nwere otu ụlọ. Bourgeois Akwadoro m ịlụ ọgụ ụmụ nwanyị, na nke ahụ bụ ihe pụtara ìhè n'oge 1946-47, na eserese ya "Femmes Maison" gosipụtara na Paris.
Foto - Peter Bellamy
Ke adianade do, enye ama odomo ata ediwak ke ntụk owo, ndien ke akande oro ye enye oro anamde nnyịn inen̄ede ikop ndobo: ndịk. Maka ya, egwu yiri ihe mgbu. Mgbu nke nwere ike ịbụ nke anụ ahụ, nke uche, nke mmụọ, ma ọ bụ nke ọgụgụ isi. Ọ dịghị onye na-ewepụ mmetụta ya ma ọ bụ, kama, oge ụfọdụ n'oge ndụ ha niile, yabụ anyị niile chọrọ izere ya ma ọ bụ, ọbụlagodi, mara otu esi emeso ya. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-ahọrọ ide akwụkwọ, zere ọnọdụ ahụ ọ masịrị ha ntakịrị, ma ọ bụ pụọ maka ịgagharị, ụzọ dị irè, n'ụzọ, iji nwee ahụ iru ala na ịdị jụụ ọzọ, Bourgeois họọrọ iji ya mee ihe ọkpụkpụ na eserese.
N'ezie, otu ụzọ izizi iji mee ka ihe ha hụrụ mara gị bụ, itinye ihe ga-amata gị, ọ bụrụ n'ụdị gị, etu o siri kee, ... ma ọ bụ itinye ihe nke aka gị n'ọrụ gị. Nke ahụ bụ ihe onye na-ese ihe mere, onye debere foto, akwụkwọ ozi, uwe, ... ọbụnadị ederede ya ebe ọ na-ede ihe niile ọ hụrụ ma mee n'oge ọ bụ nwata. Dị ka ya onwe ya kwuru: »Achọrọ m ncheta m bụ akwụkwọ m». Ma olee ụzọ kacha mma iji cheta ihe gara aga karịa ịhụ, imetụ, were ihe nke oge ahụ ọzọ iji nwetaghachi mmetụta nke ị nwere na mbụ. Agbanyeghị, ee, ọ bụrụ na ị gafere oge ihe isi ike, ọ ga-aka mma ịgbaghara ihe gara aga iji nwee ike ịga n'ihu n'usoro gị ugbu a.
Foto - Christopher Burke
Emepụtara Las Celdas, ihe ngosi ị nwere ike ihu ruo Septemba 4 na Guggenheim Museum na Bilbao, na njedebe nke ndụ onye na-ese ihe, mgbe ọ dị afọ 70. Ihe ndị ae kere eke na-eweta ụwa abụọ dị iche iche: ụwa dị n'ime na mpụga nke jikọtara, na-eme ka onye na-ekiri ya nwee ụdị mmetụta, nke nwere ike iso ya na-atụgharị uche. N'ezie, ọrụ Bourgeois na-agwa echiche, ọ bụghị naanị banyere ihe ọkpụkpụ n'onwe ya, kamakwa maka ịdị adị nke anyị, nke ụwa nke anyị.
Oge Guggenheim Museum na ọnụego
Nwere ike ịhụ ma nwee ọ theụ na ihe ngosi ahụ Mkpụrụ ndụ, nke onye okike bụ Louis Bourgeois, Tuesday ruo Sunday site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke ụtụtụ.. Ọnụego ya bụ ndị a:
Okenye: euro 13
Ezumike: 7,50 euro
Otu karịrị 20 ndị mmadụ: € 12 / person
Studentsmụ akwụkwọ nọ n'okpuru afọ 26: euro 7,50
Childrenmụaka na Enyi nke Museum: n'efu
Foto - Maximilian Geuter
Ya mere ugbu a na ị maara, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga Bilbao ma ọ bụ gburugburu ya n'oge ọnwa ndị a, echefula Las Celdas. Fọdụ ọrụ dị ịtụnanya nke onye na-ese ihe nwere mmetụta na-ahapụ enweghị mmasị mgbe ọ gwụchara ha, ha emebeghịkwa ruo taa. Ihe ngosi a bu na mgbe inwere ohere ihu ya, i ghaghi ichefu ya. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-enwe mmasị ịtụgharị uche na ndụ na ụwa anyị nwere, O doro anya na oge ị ga-anọ na ebe ngosi ihe mgbe ochie ga-agafe gị ngwa ngwa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n’amaghị ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » nakwa na Bilbao » Las Celdas, ihe ngosi nke Louise Bourgeois gosipụtara na Guggenheim Museum na Bilbao
Ihe 20 ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị bịa Galicia (II)
Ahịa flea kachasị mma na London